Home Wararka Mucaaridka: Doorashadaan Waa Tagtaye Tan kalaan Sugeynaa
Mucaaridka: Doorashadaan Waa Tagtaye Tan kalaan Sugeynaa
Waxaa muuqata mar haddii la awooday in Yasiin Farey laga tirtiray dembigii uu geystay ee dilka ahaa, lana soo saaray waraaq dembigii adduun looga tirtiray kii aakhiro waa halkiisee, sow maaha Kibirkii Hitler laga sheegi jiray markii uu daawaday dhoollatus ay sameeyeen ciidankiisa intii uusan dagaallada lagu hoobtay bilaabin, kadibna uu yiri Duniga aniga iska leh ee Jesus duni kale kale ha raadsado oo dhiganta doorashadaan aniga iska leh ee mucaaridka doorasho kale ha raadsadaan.
Runtii waxa maanta Galmudug laga sameeyey waxay si cad u muujiyeen sida ay doorashadu noqon doonto, taas oo aysan cidi ka qarsooneyn inuu Farmajo si Khasab ah ku soo noqonayo.
Taliyaha ku-meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Farey ayaa si rasmi ah isugu sharraxay kursiga HOP67 ee golaha shacabka kadib maalmo ay socotay hadal haynta arrintan, kadib markii laga soo dhaqay dembigii dilkii Ikran Tahliil.
Haddaba akhriste waa maxay ujeedada laga leeyahay arrintaa?
1. Waa in loo muujiyaa murashixiinta inuu waqtigoodii dhamaaday dalkana gacan bir ah lagu qaban doono oo mid waliba oo iyaga ka mid uu u carari doono halka ay caruurtiisu joogta, kadibna dadkii u dambaabay ku oran doona “ Annaga waa dadaalnay waasa nakala adkaaday”, sidaasna reer Farmajo aarsi ku billaabi doonaan.
2. In jidkan la tijaabiyo si Fahad, Kulane jiis iyo Dambiilayaal kale looga dhigo xildhibaanno kadib marka la hubiyo in mucaaridka uusan a iman Karin wax hadal ka badan sida cabaadka maanta Cabdiraxman Cabdishakuur.
3. In ay shacbiga u caddaato cidda dalkaan xukuntaa iyo in Beesha caalamka ay waxaan qeyb ka tahay oo ay macaankooda iska dhuuqayaan, koodii loo bogi waayana la siiyo PNG ama la eryo.
4. In hadda kadib doorashada la dadajiyo oo waxa haray halaambey lagu qaado muddo dhowna la soo gabagabeeyo Farmajana dhaar beenaad la dhaariyo , mucaaridkii doorasho u qeylinayeyna la yiraahdo waa taas doorashadii loo dadjiyey sida aad rabteen ee dadkiinna dhinac ka raaca ama kala carara.
5. In mardhow Somaliya ay gacanta u geli doonto hogaamiye la mid ah Yoweri Muaveni, Ismaciil Cumar Geelle, Isaias Afawerki iyo Paul Kagame oo ay duqeenna mudane Maxamed Cabduullahi Maxamed ‘Farmajo” qeyb ka fadhiisan doono kuraasta laga dhinto ee aan laga dagin.
Haddaba cid walbey afkaaga suubso oo Farmajo iyo Fahad ha isku dirin oo waxay la mid tahay oraahdii Faarax Gololey ahn oo ahayd “ Ama afkaaga hayso ama Afgooye aad”.